माधव नेपालको पार्टीको नामबाट किन हटाइदैछ ‘एमाले’ शब्द ? — Sanchar Kendra
माधव नेपालको पार्टीको नामबाट किन हटाइदैछ ‘एमाले’ शब्द ?
काठमाडौँ । गत बुधबार मात्र माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेर निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। उनको पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी हुने भनिएको थियो। तर अब नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीको रुपमा दर्ता नहुने भएको छ।
उनको पार्टीको नामबाट एमाले शब्द हटाइने बताइएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार नियमावली बिहीबार मात्र आएकाले शुक्रबार फेरि नयाँ पार्टी दर्ताको निवेदन दिने तयारी छ।
नेपाल समूहका नेताहरुका अनुसार अब एमाले हटाएर नेपालको नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी नाममा पार्टी दर्ता हुने सम्भावना छ।
आयोगका अधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार एउटा पार्टीको नाममा विशेषण झुण्ड्याएर अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने बताएपछि पार्टीको नाम परिवर्तन हुने भएको हो।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नयाँ दल दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका माधवकुमार नेपाल पक्षले संघीय संसद सचिवालयमा भिन्नाभिन्नै तरिकाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अध्यक्ष ओली पक्षका सांसदहरूले आज दोस्रो दिन पनि सभामुख कक्ष बाहिर एमालेले कारबाही गरेका १४ जनालाई निस्कासन गरेको सूचना टाँस गर्न माग गरेका हुन्। एमाले सांसद खगराज अधिकारी, महेश बस्नेतलगायतले कारबाही गरेका सांसदहरू निस्कासन गरेको सूचना छिटो टाँस गर्न माग गर्दै आएका छन्।
गत भदौ १ मा पार्टी विभाजन गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेका थिए। कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पुगे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अगाडि नबढाएको एमालेको भनाइ छ।
तर नेता नेपाल पक्षले आफूहरूलाई कारबाही नगर्न माग गरेका छन्। कारबाही नगर्न माग गरेको पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्न नमानेपछि हुलाकमार्फत् पठाइएको सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन्। ‘हामीले अस्ति नै दिएको निवदेन संसद सचिवालयले दर्ता गर्न मानेन। त्यही भएर आज हुलाकबाट निवेदन दिएका छौं,’ झाँक्रीले भनिन्।
यता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रस्तावित नयाँ दलको नाम परिवर्तन गर्ने भएका छन् । यसका लागि निर्वाचन आयोगमा पुन: दल दर्ताको निवेदन दिने उनको तयारी छ ।
बुधबार मात्रै नेपालसहितका नेताहरूले नेकपा एमाले समाजवादी नामको दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए । गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण नाममा एमाले शब्द राख्न कानुनी अड्चन आउने देखिएपछि परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
नयाँ नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी वा नेकपा समाजवादी राख्ने विषयमा छलफल चलिरहेको नेपालनिकट नेताहरूले बताएका छन् । ‘नामसहितको विषयमा कुनै प्रकारको कानुनी समस्या नआओस् भनेर आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी आयोगमा जाने नेताहरूलाई दिएका छौं,’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘नाम जुध्यो भने फेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी वा नेकपा समाजवादी राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’
खतिवडाले पुन: निवेदनका लागि नेपालसहितका नेताहरू आजै आयोग जाने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी दिए । राष्ट्रपतिले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार नियमावली संशोधन नहुँदा नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बिहीबार साँझ मात्रै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । नेपालले ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरेका छन् ।
उता एमालेको एकता बचाउन भन्दै बनेको तेस्रो समूहले आज विवाद समाधानको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सो समूहको धारणा निर्माण गर्नका लागि केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूको बैठक महाराजगञ्जमा बस्दैछ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक बिबादमा माधवकुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका तर नयाँ दल निर्माणमा सहभागी नभएका उनीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । सो समूहका ९ जना स्थायी कमिटीको सदस्यहरूको बिहीबार बैठक बसेर एकताबारे धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘एमालेको एकता बचाउने प्रयास हो । हिजो स्थायी कमिटीका नेताहरूले बसेर एक प्रकारको धारणा बनाउनु भएको छ । त्यसलाई आज केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरुबीच छलफल गरेर वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्ने छौं,’ केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने ।
बिहीबार मात्रै स्थायी कमिटीका नौ जना सदस्यहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता लिनका लागि अध्यक्ष ओलीलाई र नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया रोक्नका लागि माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा उपाध्यक्षहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उप-महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका थिए ।
सो समूहको छलफलमा ४० जनाभन्दा बढीको केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूको सहभागीता रहने गैरेले बताए । एमालेभित्र आन्तरिक बिबाद उत्कर्षमा पुगेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी नामको नयाँ दल खोल्ने प्रक्रियामा सुरु गरेका छन् । ओलीले नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारवाहीका लागि संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्‍ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोग र संसद्‌मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थालेका छन् ।